DEG-DEG: Lionel Messi Oo Go'aansaday Inuu Ka Tago Barcelona Iyo Kooxda Uu U Saxeexayo - GOOL24.NET
DEG-DEG: Lionel Messi Oo Go’aansaday Inuu Ka Tago Barcelona Iyo Kooxda Uu U Saxeexayo
Ugu dambayntii waxa la ogaaday go’aanka Lionel Messi ee kooxdiisa Barcelona, waxaanay noqotay inuu doonayo inuu iskaga tago dhamaadka xilli ciyaareedkan, sidii uu horeba ugu sheegay xagaagii hore.
Laacibka reer Argentina ayaa si xor ah uga tegi doona Barcelona oo uu usoo ciyaarayay tan iyo intii uu kacaamay, iyadoo kooxdani ka keentay waddanka Argentina iyadoo ay da’diisu aad u yarayd.
Lionel Messi ayaa boggagga hore ee warbaahinta haystay marka laga hadlayo ciyaartoyda ruxaya suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaaga soo aaddan, waxaana hadda la sheegayaa inuu ku adkaystay go’aankiisii ahaa inuu soo afjaro waayihiisa Camp Nou marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan socda.
Sida uu xaqiijyey wariye Marcelo Bechler, Lionel Messi ayaa go’aansaday in sannadaha kooban ee ka hadhay cimrigiisa ciyaareed ee uu tijaabiyo koox kale iyo horyaal kale, isla markaana uu shandaddiisa ka qaaddo Camp Nou marka uu dhamaysto xilli ciyaareedkan.
Wariyaha ayaa intaa ku daray in ilo u dhow Lionel Messi oo uu ku kalsoon yahay ay u sheegeen xogta ah in laacibkani uu u wareegi doono kooxda reer France ee Paris Saint-Germain oo uu kula midoobi doono saaxiibbadiisii hore ee Lionel Messi iyo Angel di Maria.
Messi ayaa go’aanka kama dambaysta ah gaadhay markii ay soo dhamaatay ciyaartii kooxdiisa Barcelona lagaga reebay tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan oo celceliska labadii lugood ee wareegga 16ka ay PSG ku garaacday 5-2.
Lionel Messi oo uu qandaraaskiisu dhamaanayo June 30, ayaa iska diiday inuu heshiis cusub saxeexo, waxaanu xor u noqday inuu la xaajoon karo kooxda uu doonayo bishii January ee sannadkan.
33 jirkan ayaa xagaagii hore dalbaday in la fasaxo, isagoo ku dooday in heshiiskii uu kula jiray kooxdu uu dhigayo in sannadka ugu dambeeya uu si xor ah uga tegi karayo, laakiin madaxweynihii hore ee Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa muran sharci ku abuuray, waxaanu ku qasbay inuu sii joogo illaa inta heshiiskiisu dhamaanayo.
Laakiin Barcelona ayay gashay rajo ah in uu Messi sii joogi doono markii madaxweyne loo doortay Joan Laporta oo ay xidhiidh dhow leeyihiin Leo, kaas oo doorashadiisiina uu waqti hore tegay si uu u codeeyo, iyadoo la rumaysan yahay inuu Laporta codka siiyey.
Lionel Messi ayaa Barcelona u ciyaaray 766 ciyaarood oo dhamaan tartamada ah, waxaanu u dhaliyey 659 gool.
Si kastaba, Lionel Messi iyo wakiilkiisa oo ah aabbihii Jorge Messi ayaan ka hadal warkan cusub, waxaase la eegi doonaa haddii ay jawaab ka bixiyaan.